အာရှတိုက်ရှိ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေများ စာရင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤသည်မှာ အာရှတိုက်ရှိ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေများ စာရင်းဖြစ်သည်။ ဤစာရင်းတွင် အပြည်အဝအသိအမှတ်ပြုထားသော နိုင်ငံများ၊ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ အသိအမှတ်ပြုထားသော နိုင်ငံများ၊ အာရှနှင့် အာရှမဟုတ်သော အမှီအခိုနယ်မြေများ ပါဝင်သည်။ ဤစာရင်း၌ အသိအမှတ်ပြုအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ ၄၉ နိုင်ငံ(အားလုံးမှာ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်)၊ အကန့်အသတ်ရှိသောလည်း တောင့်တင်းခိုင်မာသော၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုမှုရှိသော de-facto နိုင်ငံ ၂ နိုင်ငံ(ဤအထဲမှ တစ်နိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ လေ့လာသူနိုင်ငံဖြစ်)၊ အကြီးအကျယ်အသိအမှတ်ပြုမှုမရှိသည့် de-facto နိုင်ငံ ၄ နိုင်ငံနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေ ၆ ခုနှင့် အခြားသော နယ်မြေများအား စာရင်းပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်။
၁.၂ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် ခိုင်မာမှုရှိသော်လည်း ကန့်သတ်မှုရှိသော De-facto နိုင်ငံများ
၁.၃ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုမှု အနည်းငယ် (သို့မဟုတ်) မရှိသော De-facto နိုင်ငံများ
၂ အမှီအခိုနယ်မြေများနှင့် အခြားနယ်မြေများ
၃ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံအတွင်းရှိ အထူးဒေသများ
ဒေသတွင်း အတိုကောက်နာမည်နှင့် တရားဝင်အမည်
အာရပ်: قطر — دولة قطر‎ (Qatar — Dawlat Qatar) ဒိုဟာမြို့
အာရပ်: الدوحة‎ (Ad Dawḩah) ၂,၃၃၄,၀၂၉ 00011586 !၁၁,၅၈၆ km2 (၄,၄၇၃ sq mi)
အာရပ်: دولة الكويت — اﻟﻜﻮﻳت‎ (Al Kuwayt — Dawlat al Kuwayt) ကူဝိတ်မြို့
အာရပ်: الكويت‎ (Al Kuwayt) ၃,၂၆၈,၄၃၁ 00017818 !၁၇,၈၁၈ km2 (၆,၈၈၀ sq mi)
ဂျော်ဒန် ဟာရှီမိုက် ဘုရင့်နိုင်ငံ အာရပ်: اﻷرُدن — المملكة الأردنية الهاشميه‎ (Al Urdun — Al Mamlakah al Urdunīyah al Hāshimīyah) အမ်မန်မြို့
အာရပ်: عمان‎ (Ammān) ၆,၅၀၈,၈၈၇ 00089342 !၈၉,၃၄၂ km2 (၃၄,၄၉၅ sq mi)
ဆီးရီးယား အာရပ်သမ္မတနိုင်ငံ အာရပ်: سورية / سوريا — الجمهورية العربية السورية‎ (Sūrīyah / Sūriyā — Al Jumhūrīyah al ‘Arabīyah as Sūrīyah) ဒမားစကပ်မြို့
အာရပ်: دمشق‎ (Dimashq) ၂၂,၅၃၀,၇၄၆ 00185180 !၁၈၅,၁၈၀ km2 (၇၁,၄၉၈ sq mi)
ဆော်ဒီအာရေဗျဘုရင့်နိုင်ငံ အာရပ်: السعودية — المملكة العربية السعودية‎ (As Su‘ūdīya — Al Mamlakah al ‘Arabīyah as Su‘ūdīyah) ရီယာ့ဒ်မြို့
အာရပ်: الرياض‎ (Ar Riyāḑ) ၃၁,၅၂၁,၄၁၈ 02149690 !၂,၁၄၉,၆၉၀ km2 (၈၃၀,၀၀၀ sq mi)
တာဂျစ်ကစ္စတန် သမ္မတနိုင်ငံ တာဂျစ်: Тоҷикистон — Ҷумҳурии Тоҷикистон (Tojikiston — Jumhurii Tojikiston) ဒူရှန်ဘဲမြို့
တာဂျစ်: Душанбе (Dushanbe) ၇,၇၆၈,၃၈၅ 00143100 !၁၄၃,၁၀၀ km2 (၅၅,၂၅၁ sq mi)
အူရဒူ: پَاکِسْتَان — اسلامی جمہوریہ پاکستان‎‎ (Pākistān —Islāmī Jamhuriyah-e-Pākistān) အစ္စလာမာဘတ်မြို့
အူရဒူ: اسلام آباد‎ (Islāmābād) ၂၁၀,၄၄၃,၀၀၀ 00796095 !၇၉၆,၀၉၅ km2 (၃၀၇,၃၇၄ sq mi)
ဘာရိန်းဘုရင့်နိုင်ငံ အာရပ်: مملكة البحرين — البحرين‎ (Al Baḩrayn — Mamlakat al Baḩrayn) မာနာမာမြို့
အာရပ်: المنامة‎ (Al Manāmah) ၁,၃၁၆,၅၀၀ 00000760 !၇၆၀ km2 (၂၉၃ sq mi)
ယီမင်သမ္မတနိုင်ငံ အာရပ်: اليمن — الجمهورية اليمنية‎ (Al Yaman — Al Jumhūrīyah al Yamanīyah) Sana'a
အာရပ်: صنعاء‎ (Şan‘ā’) ၂၅,၉၅၆,၀၀၀ 00527968 !၅၂၇,၉၆၈ km2 (၂၀၃,၈၅၀ sq mi)
လက်ဘနွန်သမ္မတနိုင်ငံ အာရပ်: لبنان — الجمهورية اللبنانية‎ (Lubnān — Al Jumhūrīyah al Lubnānīyah) ဘေရွတ်မြို့
အာရပ်: بيروت‎ (Bayrūt) ၄,၁၄၀,၂၈၉ 00010400 !၁၀,၄၀၀ km2 (၄,၀၁၅ sq mi)
အစ္စရေးနိုင်ငံ ဟီဘရူး: יִשְרָאֵל — מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ (Yisra'el — Medinat Yisra'el)
အာရပ်: إسرائيل — دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ (Isrā'īl — Dawlat Isrā'īl) ဂျေရုဆလင်မြို့ (Claimed and de facto)[c]
ပက်ရှ်တွန်း: د افغانستان اسلامي جمهوریت — افغانستان‎ (Afghān̄istān — Afghānistān Islāmī Jumhūrīyat) ကဘူးလ်မြို့
ပက်ရှ်တွန်း: کابل‎ (Kābul) ၂၆,၅၅၆,၈၀၀ 00652230 !၆၅၂,၂၃၀ km2 (၂၅၁,၈၂၇ sq mi)
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ အာရပ်: اﻹﻣﺎرات — دولة الإمارات العربية المتحدة‎ (Al Imārāt — Al Imārāt al ‘Arabīyah al Muttaḩidah) အဘူဒါဘီမြို့
အာရပ်: أبوظبي‎ (Abu Dhabi) ၉,၅၇၇,၀၀၀ 00083600 !၈၃,၆၀၀ km2 (၃၂,၂၇၈ sq mi)
အိုမန် ဆူလတန်နိုင်ငံ အာရပ်: عُمان — سلطنة عُمان‎ (‘Umān — Salţanat ‘Umān) မက်စကတ်မြို့
အာရပ်: مسقط‎ (Masqaţ) ၃,၀၉၀,၁၅၀ 00309500 !၃၀၉,၅၀၀ km2 (၁၁၉,၄၉၉ sq mi)
အီဂျစ် အာရပ်သမ္မတနိုင်ငံ[n ၁] အာရပ်: مصر — جمهورية مصر العربية‎ (Miṣr—Jumhūrīyat Miṣr al-ʿArabiyya) ကိုင်ရိုမြို့
အီရတ်သမ္မတနိုင်ငံ အာရပ်: العراق — جمهورية العراق‎ (Al ‘Irāq — Jumhūrīyat al ‘Irāq) ဘဂ္ဂဒက်မြို့
အာရပ်: بغداد‎ (Baghdād) ၃၆,၀၀၄,၅၅၂ 00438317 !၄၃၈,၃၁၇ km2 (၁၆၉,၂၃၅ sq mi)
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတနိုင်ငံ ပါရှန်း: جمهوری اسلامی ایران — ایران‎‎ (Īrān — Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān) တီဟီရန်မြို့
ပါရှန်း: تهران‎ (Tehrān) ၇၈,၈၆၈,၇၁၁ 01648195 !၁,၆၄၈,၁၉၅ km2 (၆၃၆,၃၇၂ sq mi)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် ခိုင်မာမှုရှိသော်လည်း ကန့်သတ်မှုရှိသော De-facto နိုင်ငံများ[ပြင်ဆင်ရန်]
တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ကြေညာ၍ထားသည်။ အစိုးရ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ၁၆ နိုင်ငံသော ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် Holy See တို့မှ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု၍ထားသည်။ သို့သော် ထိုင်ဝမ်သည် နိုင်ငံအများစုနှင့် တရားမဝင်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ထားပြီး de-facto အားဖြင့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံအများစုမှ အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ဤအခြေအနေအား ပိုမိုသိရှိလိုလျှင် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေအား ဆက်လက်ဖတ်ရှုကြည့်နိုင်သည်။ Traditional Chinese: 臺灣/台灣 — 中華民國 (Táiwān — Zhōnghuá Mínguó) ထိုင်ပေမြို့
ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ကြေညာထားသည်။ ၁၃၇ နိုင်ငံသော ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သော လေ့လာသူနိုင်ငံဖြစ်သည်။ အာရပ်: فلسطين‎ (Filasṭīn) ဂျေရုဆလင်မြို့ (ကြေညာထား)
အာရပ်: رام الله‎
(Rāmāllah) ၄,၅၅၀,၀၀၀ 004550000 !၆,၂၂၀ km2 (၂,၄၀၂ sq mi)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုမှု အနည်းငယ် (သို့မဟုတ်) မရှိသော De-facto နိုင်ငံများ[ပြင်ဆင်ရန်]
တမ်းပလိတ်:Lang-ab (Akwa)[ကိုးကားချက်လိုသည်] 250,000 ၈,၆၆၀ km2 (၃,၃၄၄ sq mi)
Republic of Artsakh Claimed as part of Azerbaijan. Recognised only by3non-UN states.[ကိုးကားချက်လိုသည်] တမ်းပလိတ်:Lang-hy[ကိုးကားချက်လိုသည်] (Lernayin Gharabaghi — Lernayin Gharabaghi Hanrapetut’yun) Stepanakert
တမ်းပလိတ်:Lang-os (Chreba)[ကိုးကားချက်လိုသည်] 70,000 ၃,၉၀၀ km2 (၁,၅၀၆ sq mi)
↑ Although the majority of Egypt is in Africa, it could be argued that the Sinai Peninsula is geographicallyapart of Asia.
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ Field Listing :: Names။ CIA။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ UNGEGN List of Country Names။ United Nations Group of Experts on Geographical Names (2007)။ 28 July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ ၃.၄ ၃.၅ ၃.၆ ၃.၇ ၃.၈ ၃.၉ List of countries, territories and currencies။ Europa (9 August 2011)။ 10 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ ၄.၄ Field Listing :: Capital။ CIA။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UNGEGN World Geographical Names။ United Nations Group of Experts on Geographical Names (29 July 2011)။3August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ ၆.၃ ၆.၄ Country Comparison :: Population။ CIA (July 2012)။ 27 September 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2September 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇.၀ ၇.၁ ၇.၂ ၇.၃ ၇.၄ Field Listing :: Area။ CIA။ 31 January 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Government Information Office, Republic of China (Tawian)။ Government Information Office, Republic of China (Taiwan)။3April 2005 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ About Abkhazia။ Abkhazia Ministry of Foreign Affairs။ 14 July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Abkhazia (autonomous republic, Georgia)။ Encyclopædia Britannica။ 2011-03-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Abkhazia presents proof of independence recognition by Vanuatu"၊ RT၊7June 2011။3August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Regions and territories: Abkhazia"၊ BBC News၊ 8 February 2011။ 8 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on5November 2019။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ ၁၄.၂ Country Overview။ Office of the Nagorno Karabakh Republic in the United States။3August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Regions and territories: Nagorno-Karabakh။ BBC News (20 January 2011)။3August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Official website of the President of the Nagorno Karabagh Republic။ President.nkr.am။ 8 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nagorno-Karabakh (region, Azerbaijan)။ Encyclopædia Britannica။ 8 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၈.၀ ၁၈.၁ "A Mediterranean Quagmire"၊ The Economist၊ 22 April 2010။3August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi (in Turkish)။ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti။ 2018-03-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cyprus country profile။ BBC News (27 May 2011)။3August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ DPÖ: "2009 sonu itibarıyla nüfus 285 bin 356"။ Kibris Postasi (8 October 2010)။ 8 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၂.၀ ၂၂.၁ ၂၂.၂ "Regions and territories: South Ossetia"၊ BBC News၊ 8 February 2011။ 8 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kafkas Vakfi။ South Ossetia။ Hartford Web Publishing။ 8 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၄.၀ ၂၄.၁ Field Listing :: Dependency Status။ CIA။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၅.၀ ၂၅.၁ Australian Government — Department of Infrastructure and Regional Development။ 2016 Census: Christmas Island။ 11 January 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ British Indian Ocean Territory။ CIA။ 29 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ As reflected in the Chinese text of the Macau emblem, the text of the Macao Basic Law Archived5February 2012 at the Wayback Machine., and the Macao Government Website Archived 29 June 2012 at the Wayback Machine., the full name of the territory is the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China. Although the conventions of "Macao Special Administrative Region", "Macao" and "Macau" can also be used.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာရှတိုက်ရှိ_အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့်_အမှီအခိုနယ်မြေများ_စာရင်း&oldid=727978" မှ ရယူရန်
နီပေါဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
အာရှတိုက်ရှိ နိုင်ငံများ၏ စာရင်းများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။